ShweMinThar: June 2010
အိမ်သို့ပြန်ရောက်လာသော ကလေးငယ်က မိခင်ကို သူ့အတွေ့အကြုံပြန်ပြောပြသည်။
"မေမေ...ဒီနေ့ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ အန်တီကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ခြေထောက်ကို သားတက်နင်းမိလိုက်တယ်။ သားက တောင်းပန်လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ အန်တီကြီးက သားကို ချောကလက်တစ်ခု ထုတ်ကျွေးတယ်။ "
"သားက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောလိုက်ရောလား"
"ဟင့်အင်း....သူ့ရဲ့ နောက်ထပ် ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို တက်နင်းလိုက်တယ်"
ကျွန်တော်တို့ လူမှုဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်ထဲမှာ Handicapပေးထားရတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။
Handicapဆိုတာက ပစားပေးထားတဲ့ သဘောကို ဆိုတာပါ။ ကစားပွဲတွေမှာဆိုရင် အမှတ်ကြောပေးထားတာပေါ့။
ကိုယ်နဲ့ စစ်တုရင်ထိုးမယ့်သူဟာ ကိုယ့်အောက်နိမ့်ကျတဲ့ စွမ်းရညရှိသူဖြစ်နေရင် သူ့ရဲ့ အားနည်းချက်ကို
သက်ညှာတဲ့အနေနဲ့ ကိုယ့်ဘက်က ဘစ်ရှော့အရုပ်တစ်ရုပ်၊ဒါမှမဟုတ်.........မြင်းရုပ်တစ်ရုပ် ပွဲမစခင်ကတည်းက အကျဆုံးခံပြီး
ဒါမှ တရားမျှတမှုရှိမယ်လို့ ယုံကြည်တာကိုး ။
လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာလည်း ဒီလိုပဲ။ တချို့ လူတွေကို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် (သနားလို့၊ အားနာလို့) ပစားပေး သက်ညှာထား တာတွေရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ခက်တာက သူတို့ထဲက တချို့လူတွေမှာ တမင်သက်ညှာမှန်းမသိကြဘူး။ ရောင့်တက်လာကြတယ်။
ကိုယ့်ခြေထောက်ကိုတက်နင်းပြီး တောင်းပန်လို့ ကိုယ်ကသနားအားနာတာနဲ့ချောကလက်တစ်ခု ထုတ်ကြွေးလိုက်မိပါတယ်။ သူတို့က နောက်ထပ်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုထပ်ပြီးနင်းကြပြန်ရော။
တချို့ အိမ်တွေ၊ တချို့ဆိုင်တွေမှာ .....
(အားနာလို့ လိုက်လျောတာ အတယ်လို့ မထင်နဲ့)ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို တွေ့တွေ့နေရတော့ "သြော်...သူတို့လည်း ခဏခဏ ခြေထောက်နင်းခံရရှာတယ်ထင်ပါရဲ့"လို့ တွေးပြီး ပြုံးမိတယ်။
ဟုတ်တယ်လေ...။မကောင်းတတ်လို့ အလျော့ပေးနေရတာမှန်ပေမယ့် ခဏခဏဖြစ်လာတော့လည်း ဘယ်သူသည်းခံနိုင်မှာလည်း။
အားလုံးက ပုတုဇဉ်တွေပဲ မဟုတ်လား။
ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ကတော့ အဲဒီဆိုင်းဘုတ်ကို တစ်မျိုးဖတ်မိရှာတယ်။
(အားနာလို့လိုက်လျောတာ "အတယ်" လို့ မထင်နဲ့တဲ့။)
သူကအဲဒီလိုဖတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို လာမေးနေတယ်။ "ဟေ့ကောင်...အတယ်ဆိုတာ တရုတ်လို အဖေကိုပြောတာ မဟုတ်လား...တဲ့။
နောက်ထပ် ချောကလက် တစ်ခု ထပ်လိုချင်လို့ အားမနာ၊ပါးမနာ သူများခြေထောက်ထပ်နပ်နင်းတဲ့ သူရဲ့ အတွေးဟာ "ကလေးအတွေးပါ" ။ကျွန်တော် ပြောခဲ့ပြီးသားပဲ။ အဲဒီလူတွေဟာ ကလေးတွေ၊ ကလေးဆန်တဲ့ လူတွေပါ ဆိုတာ။
သူတို့ကို ဘယ်သူက ရေရှည်မှာ သည်းခံနိုင်မှာလဲ။ အလွန်ဆုံး သူ့အဖေ၊အမေပဲပေါ့။ ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ ကြာလာတာနဲ့အမျှ စိတ်ပျက်လာမှာသေချာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကလေးအတွေးဆိုတာ ခက်သားလား။
ကိုယ့် အဖေ၊အမေအပေါ် ဆိုးချင်တိုင်း ဆိုးလို့ရရုံနဲ့ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးအပေါ်မှာလည်း အဲသည်လို ဆိုးဖို့ "အခွင့်အရေး" ရမယ်လို့ ထင်နေတတ်တာမျိုး။
အဲသည် ကလေးစိတ်၊ကလေးဥာဉ်မျိုးတွေ့ရင် အားလုံးဝိုင်းပြီးပြုပြင်ပေးကြဖို့လိုပါတယ်။
အဲသည် အပြုပြင်ခံ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း အမှန်တကယ် လိုလိုလားလား ပြုပြင်ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
လောကမှာ အရေးကြီးဆုံးက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရှိ.....အရှိအတိုင်းတည့်တည့်မတ်မတ် မှန်မှန်ကန်ကန် မြင်တတ်တဲ့
"သတိ" ရှိဖို့ပါပဲ..........။ ။
Posted by Alex Aung at 9:33 AM No comments:
``ကျောင်းရောက်ရင် သားကို ကကြီးရေးပြပါလုိ့ ခိုင်းလိမ့်မယ်မေမေရဲ့´´
``ဒါများ....ဘာခက်လို့လဲ သားရယ်၊ ရေးပြလိုက်ပေါ့´´
``မေမေ ဘာသိလို့လဲ၊ ကကြီးရေးပြီးရင် သူတို့က ခခွေးပါ ဆက်ပြီးရေးခိုင်းကြဦိးမှာ.....´´
အဲဒီဟာသထဲက ကလေးငယ်ရဲ့ စဉ်းစားပုံ စဉ်းစားနည်းဟာ လူကြီးတွေအတွက် ရယ်စရာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာပါ။
ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်က ပြန်စဉ်းစားရင် ကလေးငယ်ဟာ(သူ့ကိုယ်သူတော့)အင်မတန်မှ အမြော်အမြင် ကြီးမားစွာစဉ်င်္းစားဆုံးဖြတ် လိုက်တယ်လို့ အောက်မေ့မှာမလွဲပါဘူး။
မှန်ပါတယ်။ သူ့မှာလည်း ကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့ မြော်မြင်ဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့ စဉ်းစားနည်း (Speculative Thinking) ရှိနေတာပဲမဟုတ်လား။
အမေ လုပ်တဲ့သူက ``ကကြီး´´ရေးခိုင်းရင် ``ကကြီး´´ရေးလိုက်၊
``ခခွေး´´ ရေးခိုင်းရင် ``ခခွေး´`ရေးလိုက်၊ ``ဂငယ်´´ ရေးခိုင်းတဲ့ အခါကျတော့လည်း ``ဂငယ်´´ရေးလိုက်ပေါ့လို့ စဉ်းစားတယ်။
အဲဒီလို တစ်ခုချင်းစီ ဖြတ်သန်းရင်းနဲ့ သူ့သားငယ်ဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့စာတတ်မြောက်တဲ့သူ တစ်ယောက် ဖြစ်လာမယ် ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ``နိဂုံး´`တစ်ခုကို ဆင်ခြင်ထားတယ်။
ကလေးငယ်ရဲ့ ဆင်ခြင်မှုကလည်း မမှာယွင်းပါဘူး။
``ကကြီး´´ ပြီးရင် ``ခခွေး´´၊ ``ခခွေး´` ပြီးရင် ``ဂငယ်´´ စသည်ဖြင့် မဆုံးတမ်းလာတော့မယ်ဆိုတာ သူလည်းတွေးနေမိတာပဲ။
ဒါပေမယ့် ကလေးငယ်ရဲ့ ``နိဂုံး´´ကျတော့ ``အဲသည်လိုဒုက္ခ (စာလုံးတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု သင်နေရတာကို ကလေးငယ်ကတော့ ဒုက္ခ လို့ထင်မှာပေါ့) အဆင့်ဆင့် ကို ရေရှည် မခံစားရဖို့ ´´ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်။ တိုတို ပြောရရင် ``သက်တေင့်သက်သာနေရရေး´´
ဒါကြောင့် ဒီဒုက္ခကို စောစောစီးစီးလမ်းစဖြတ်တဲ့အနေနဲ့ ``ကျောင်းမသွားချင်ဘူး´´လို့ပြောလိုက်တာပါ။
ကျွန်တော်တို့ လူကြီးတွေကကော ဘာထူးသလဲဟု တွေးမိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ လူ့ဘ၀ကို ရပြီဆိုကတည်းက ဒုက္ခသင်ခန်းစာရဲ့ ပထမဆုံး အက္ခရာ ဖြစ်တဲ့ ``ကကြီး´`ကို စ ရေးခဲ့ရပါပြီ။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ ``ခခွေး´´တွေ ``ဂငယ်´´ တွေကို ဆက်တိုက် တွေ့လာရဦးမှာပါ။ဘ၀ဆိုတာ ဒုက္ခ ဆိုတဲ့ အက္ခရာတွေကို သင်ကြားပြဌာန်းထားတဲ့ စာအုပ်ကြီးတစ်အုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဘယ်သူက ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ အက္ခရာကို သင်ကြားချင်ကြလို့လဲ။
ဒုက္ခတစ်ခုချင်းစီနဲ့ တွေ့ကြုံရတိုင်း မပြီးသေးဘူးလား၊ အပြီးဆုံးနိုင်သေးဘူးလားလို့ ညည်းတွားကြတာချည်းပဲ မဟုတ်လား။
တကယ်ဆိုရင် ဒုက္ခတွေကို ရင်ဆိုင်တဲ့နည်းက သိပ် အဆန်းတကြယ်မဟုတ်ပါဘူး။ခက်ခက်ခဲခဲလည်းမဟုတ်ပါဘူး။``ကကြီး´´ဒုက္ခနဲ့ ကြုံရင် ``ကကြီးကို´´ရေးချလိုက်၊ ``ခခွေး´´ ဒုက္ခနဲ့ကြုံအခါ `ခခွေး´` ကို ရေးချလိုက်ရုံပါပဲ။
ဒီလိုပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြတ်သန်းသွားကြရအောင်။ ဒါမှ တကယ်လူကြီး အတွေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အားလုံးက ညည်းတွားနေကြတယ်။ စိတ်ပျက်နေကြတယ်။ လောကဆိုတဲ့ ကျောင်းကို မတက်ချင်ဘူးဆိုပြီး ကျောင်းပြေးချင်နေကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဆင်ခြင်မှုရဲ့ ``နိဂုံး´´က ဘ၀ကို နားလည်တတ်မြောက်ဖို့မဟုတ်ပဲ ``သက်တောင့်သက်သာ နေထိုင်ဖို့´` ရည်ရွယ်ထားကြတာကုိး။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ တတွေဟာ ......
လျင်မြန်စွာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေနှင့် တင်းကျပ်နေသော ကမ္ဘာကြီးထဲတွင် ခေတ်ကိုအမီလိုက်၍ ပြေးလွှားနေရသော နိစ္စဓူဝကိစ္စတွေကို ခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ် ဘေးဖယ်ထားလိုက်ပါလား။ မွန်းကျပ်နေသော သင်၏ကမ္ဘာလေးထဲက ဖဲ့ထွက်ပြီး သစ်ပင်ပန်းပင်များဖြင့် စိန်းလမ်းဝေဆာနေသော နီးရာ ပန်းခြံတစ်ခုခုသို့သွားရောက်၍ အပန်းဖြေပါ။ ပင်လယ်ကမ်းခြေသို့ မသွားနိုင်သည့်တိုင် မြစ်ဘေး၊ကမ်းဘေး၊ချောင်းနံဘေးလို တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သော နေရာတစ်နေရာသို့ သွားကြည့်ပါ။ သို့မဟုတ် ကျေးလက်တောရွာများသို့ လည်ပတ်ပါ။
ဒါမှမဟုတ် ဘုရားပရိဝုဏ်ဖြစ်စေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ဖြစ်စေ သွားရောက်၍ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းပါ။ မေတ္တာတရားပွား များပါ။ ငှက်ကလေးတွေကို အစာကျွေးပါ။ ဒါတွေ တစ်ခုမှအဆင်မပြေလျှင် သင့်အိမ်ဝန်းခြံထဲမှ ဒန်းလေးပေါ်တွင်လွှဲ၍ တစ် ကိုယ်တည်းအေးဆေးစွာ အနားယူပါ။ ယုတ်စွအဆုံး သင်၏ဧည့်ခန်းစားပွဲမှာ မွှေးကြိုင်လန်းဆန်းသော ပန်းအိုးလှလှလေး များထိုးထားခြင်း၊ ပန်းပင်တစ်ပင် ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းတို့သည်ပင် သဘာဝတရားနှင့် နီးစပ်နေကြောင်း ခံစားတွေ့ရှိရပါ လိမ့်မည်။
လောကတွင် အကောင်းနှင့်အဆိုးသည် ဒွန်တွဲလျက်ရှိနေပါသည်။ လောကနိယာမတရားအရ အဖြူရှိလျှင် အမည်းရှိမည်။ အပူရှိလျှင် အအေးရှိမည်။ အလင်းရှိလျှင် အမှောင်ရှိမည်။ သည်အချက်ကို နားလည်သဘောပေါက်သည်နှင့် ဘ၀ခရီးကို လျှောက်လှမ်းရန် လွယ်ကူပါလိမ့်မည်။ သင်၏ အတွေးများကို အတိတ်၏လှောင်အိမ်ထဲတွင် ဖမ်းလှောင်ထားခြင်းဖြင့် အကျိုးမရှိနိုင်ပါ။ အဆင်ပြေချောမွှေ့ခြင်းမရှိခဲ့သည့် အတိတ်မှဖြစ်ရပ်များကို ပြည်ဖုံးကားချ၍ မေ့ပစ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ သူတစ်ပါးကိုလည်း ခွင့်လွှတ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ သည်နည်းဖြင့် ခါးသီးသောအတွေ့အကြုံများမှ ရုန်းထွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ပုံသေရှုမြင်တွေးတောတတ်သော သင့်အမြင်သဘောထားကို ပြောင်းလဲပစ်ခြင်းဖြင့် ဘ၀၏အလင်းရောင်ကို တွေ့မြင်ထိ တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ သင့်လုပ်ငန်းခွင်နှင့်အိမ်မှာပါ အောင်မြင်လိုသည်ဆိုပါက သင်ဖြစ်စေချင်သည့်အတိုင်း သဘာဝကျကျ ဆက်ဆံပါ။ အားလုံး အဆင်ပြေချောမွေ့လာပါလိမ့်မည်။
လူတိုင်းတွင် ဒေါသစိတ်၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် အဆိုးမြင်တတ်သည့် သဘောသဘာဝရှိ တတ်ကြပါသည်။အရေးကြီးသည်မှာ ထိုသူတို့၏လွှမ်းမိုးမှုကို မခံရဖို့ပဲဖြစ်သည်။ အရာရာတိုင်းတွင် မလိုအပ်ဘဲ စိုးရိမ်ပူပန်တတ်သည့် အကျင့်စရိုက်ကိုလျှော့၍ အသက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်းဝလင်အောင် ရှူရှိုက်လျက် သက်သောင့်သက်သာစွာ နေပစ်လိုက်ပါ။
မျက်တောင်တစ်ဖျားသာကြည့်မြင်၍ လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲနှင့် ဘ၀ပြဿနာများကို ဆိုးဝါးလှပြီဟု မတွေးထင်ပါနှင့်။ မျက်စိတစ်ဆုံးကြည့်မြင်၍ နောင်လာမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာကို မျှော်ကြည့်လိုက်ပါ။ ယခုတွေ့ကြုံရသော ဘ၀ပြဿနာမှာ ဘာမျှမပြောပလောက်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါလိမ့်မည်။
သင့်စိတ်နှလုံး တင်းကျပ်နေပါသလား။ ဆယ်မိနစ်ခန့် လမ်းလျှောက်လိုက်ပါလေ။ တစ်ပတ်လျှင် သုံးကြိမ်လောက် လမ်း လျှောက်ထွက်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ အေရိုးဗစ်အားကစားလေ့ကျင့်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် ရေကူးခြင်းတို့ကို မိနစ် (၃၀)မျှ လောက်လုပ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ ပေါ့ပါးသော လေ့ကျင့်ခန်းများကို မှန်မှန်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်ကိုကြည်လင် စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှ အန်ဒိုဖင်းများကို လျော့ပါးစေပါသည်။
မိတ်ဆွေများနှင့် ရယ်ရယ်မောမောနေခြင်းသည် အကောင်းဆုံး စိတ်အပန်းဖြေနည်းပင်ဖြစ်သည်။ ဟာသဇာတ်ကားများကို ကြည့်ပါ။ ဟာသ၀တ္ထုများကို ဖတ်ပါ။ သည်နည်းဖြင့် သင်၏စိတ်ဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းပြုနိုင်ပါက သင်၏ဘ၀အမော များ၊ စိတ်နှလုံးမွန်းကျပ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ရှုပ်တွေးပွေလီသော ကမ္ဘာလောကနှင့် အဆက်ဖြတ်လိုက်ပါ
အနိဋ္ဌာရုံများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိသော ကမ္ဘာပေါ်ရှိသတင်းအရပ်ရပ်ကိုင မသိချင်ပါနှင့်။ သင့်အတွက် ဘာမျှထူးခြားလာမည် မဟုတ်ပါ။ စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရုံသာ အဖတ်တင်ပါလိမ့်မည်။ သင့်အတွက်အသုံးကျမည့် သိသင့်သိထိုက်သည်များကိုသာ ရွေးချယ်ဖတ်ရှု၍ ကြည့်မြင်နားထောင်တတ်ပါစေ။
နိစ္စဓူဝ ပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေရသော ဘ၀အမောထဲမှ အချိန်ဇယားကို မီးခလုပ်ပိတ်သလို ခဏဖြစ်ဖြစ်ပိတ်ပြီး အေးချမ်း တိတ်ဆိတ်မှု၏ အရသာကို ခံစားပါ။ ထိုနေရာတွင် ထိုင်လျက်ဖြစ်စေ၊ လဲလျောင်း၍ဖြစ်စေ မျက်စိကိုအသာပိတ်၍ နှာသီးဝ ကို အာရုံစူးစိုက်ပြီး အသက်ရှူပါ။ စိတ်ကို ကြည်ကြည်လင်လင်ထားပါ။ သင်၏အတွေးကမ္ဘာထဲသို့ ၀င်ရောက်လာသမျှ အတွေးစများကို အသိအမှတ်ပြုပါ။ ထိုအတွေးနောက်သို့ လိုက်ပါမသွားစေဘဲ ၀င်လေ၊ ထွက်လေကိုပဲ ဆက်လက်၍ အာရုံပြုပါ။ နေ့စဉ် မိနစ်အနည်းငယ်မျှ မှန်မှန်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် စိတ်၏အေးချမ်းငြိမ်သက်မှုကို ခံစားရ ပါလိမ့်မည်။
ဂန္တ၀င်တေးဂီတဖြစ်စေ၊ ခေတ်ပေါ်တေးဂီတဖြစ်စေ မိမိနှစ်သက်ရာ ဂီတသံစဉ်များကို အဆိုမပါဘဲ ဂီတသံသက်သက် ခံစားကြည့်ဖို့ အချိန်ပေးပါ။ လှိုင်းကလေးများ တလိမ့်လိမ့်လူးလွန့်နေသည့် ပင်လယ်ကမ်းခြေကိုလည်းကောင်း၊ သာ ယာလှပသော တောင်ပေါ်ဒေသ ရှုခင်းသာကိုသော်လည်းကောင်း စိတ်အတွေးနှင့် အရောက်သွားလည်ပတ်ပါ။ ဤ သည်မှာ ဘ၀အမောမှ လွတ်မြောက်စေသည့် နည်းကောင်းတစ်လက်ပါပေ။
အချိန်မီအလုပ်ပြီးမှပြီးပါမည်လားဟု တွေးတောပူပန်ခြင်းဖြင့် ဒေါသကိုဖြစ်စေပြီး မိမိကိုယ်မိမိ အပြစ်မြင်တတ်ပါသဖြင့် မိမိ ကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုများ ပျက်ပြားလာစေတတ်ပါသည်။ စိတ်ဓာတ်ကျပါက ကိုယ်ခံအားကျဆင်း၍ အအေးမိလွယ်ခြင်း၊ နှာစေးခြင်းများကို ဖြစ်စေတတ်ပါသဖြင့် မျှမျှတတနေထိုင်ပါ။ အိမ်အလုပ်များ မနိုင်မနင်းဖြစ်နေပါက တခြားအိမ်သားများ၏ အကူအညီဖြင့် ခွဲဝေလုပ်ကိုင်ပါစေ။
အစာစားရာတွင် ပြီးပြီးရောသဘောမျိုးဖြင့် မြန်မြန်ဆန်ဆန်မစားပါနှင့်။ အချိန်ယူ၍ အေးချမ်းတက်ကြွစွာ မြိန်ရေရှက်ရည် စားသောက်သင့်ပါသည်။ စားသောက်ချိန်သည် သင်၏အလုပ်ချိန်ကို မထိခိုက်ရုံမျှမက သဘာဝကျကျ သက်သောင့်သက် သာ အားဖြည့်ပေးစေနိုင်သော အချိန်လေးဖြစ်ပါသည်။ စိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်အေးချမ်းစေမှုကို အထောက်အကူပြုသော စပျစ် သီးကဲ့သို့သော သစ်သီးဝလံများ၊ နေကြာစေ့လှော်ကဲ့သို့ အခွံမာသီးများနှင့် ၊ ပင်လယ်အစားအစာများကို များများစားသုံး ပါ။
Ref: Fashion Image Magazine Vol.13 No.3 May 2010
သင့်ရဲ့ စိတ်နဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကို အသစ်တစ်ဖန် ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း
နဂိုမူလကတည်းက စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအင်အား ဘယ်လောက်ပဲကောင်းမွန်သူဖြစ်ပါစေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ တစ်ခုမှာ ကြာမြင့်စွာနေထိုင်လှုပ်ရှားနေကြရရင် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ငြီးငွေ့ပြီးလန်းဆန်းမှုတွေ ပျောက်ဆုံးလာတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ - နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အလုပ်ထဲမှာ စိတ်နှစ်မြှုပ်ပြီး လုပ်ကိုင်နေသူများအနေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုများပြားတဲ့ အခြေအနေများနဲ့ တွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်ညစ်ညူးနောက်ကျိမှုများပြားတဲ့ အခြေအနေတွေကို တွေ့ကြုံရဖန်များလာတဲ့အခါ ကျွန်ုပ် တို့ရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေဟာ ပင်ကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုတွေကို လျော့နည်းလာစေပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ မိမိရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအင်အားတွေကို တစ်ဖန်ပြန်လည်လတ်ဆတ်စေဖို့ လုပ်ဆောင်သင့်လှပါတယ်။ အခုဖော်ပြမယ့် Refreshment နည်းလမ်းလေးတွေဟာ သင့်ကို အသစ်အသစ်သော အသိပညာများ၊ သတင်းများ၊ သဘောထားနဲ့ ခံယူ ချက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ကမ္ဘာလောကအသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ်။
Refreshment – (1)
သူငယ်ချင်းနဲ့ ထွက်တဲ့အခါ သင်ဝတ်နေကျ ပုံစံဒီဇိုင်းမဟုတ်တဲ့ အ၀တ်အစားတချို့ကို ရွေးချယ်ခိုင်းပါ။ သင်နဲ့ကြည့်ကောင်းတဲ့ အ၀တ်အစားကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီး ၀တ်ဆင်ခြင်းဟာလည်း စိတ်ရဲ့လန်းဆန်းမှုအတွက် အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Refreshment – (2)
အားကစားလေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်စာစောင်များကို ရှာဖွေဖတ်ရှုပါ။ သင့်ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကို တိုးတက်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများကို မှတ်သားပါ။
Refreshment – (3)
သင့်ရဲ့ ကိုပဲနားထောင်မယ့်အစား ရေဒီယိုကို နားထောင်ကြည့်ပါ။ ကဏ္ဍအသစ်တွေနဲ့ ဂီတအမျိုးအစားသစ်များက သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားစေမှာ အသေအချာပါပဲ။
Refreshment – (4)
သင်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနဲ့ အလုပ်ချိန်ပြင်ပမှာလည်း အတူတကွ စားသောက်ကြည့်ပါ။ ဒါဟာ အလုပ်ခွင်မဟုတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များရဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်က မိတ်ဆွေသစ်များနဲ့လည်း ရင်းနှီးမှုတံခါး ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Refreshment – (5)
သင်ပြင်ဆင်ထုံးဖွဲ့နေကျ ဆံပင်ပုံစံကနေ ခွဲထွက်ပါ။ သမားရိုးကျထုံးဖွဲ့မှုအစား လွတ်လပ်ပေါ့ပါးပြီး သွက်လက်တဲ့ သဏ္ဍာန်ကို ပေါ်လွင်စေဖို့ ပိုနီတေးပုံစံလေး စည်းနှောင်ကြည့်ပါ။
Refreshment – (6)
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ ဒါမှမဟုတ် ကို တခြားအခန်းတစ်ခုမှာ ရွှေ့ပြောင်းတပ်ဆင်ပါ။ ဒါဆိုရင် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် သင့်ရဲ့အလုပ်အပေါ်မှာလည်း ကောင်းကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
Refreshment – (7)
သင်အလုပ်သွားတဲ့အခါ စီးနေကျကားမှတ်တိုင် ဒါမှမဟုတ် ရထားဘူတာရုံကို ပြောင်းလဲပါ။ ဒါဟာ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်နဲ့ထိတွေ့ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါ။
Refreshment – (8)
သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းများနဲ့ ညစာသွားစားတဲ့အခါ တစ်ဦးအတွက်တစ်ဦး အပြန်အလှန် ဟင်းမှာပေးတဲ့စနစ်ကို သုံးကြည့်ပါ။
Refreshment – (9)
သင်သွားလေ့သွားထမရှိတဲ့ ရှိုးပွဲတချို့ကို သွားကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ဒါဟာ သင့်ရဲ့ ပုံမှန်လူနေမှုဘ၀ကနေ ခေတ္တရုန်းထွက်မှုတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဆန်းသစ်တဲ့ ခံစားမှုကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
Refreshment – (10)
သင်က လေးစားရပြီး သင်နဲ့ စရိုက်လက္ခဏာမတူညီတဲ့ ဆွေမျိုးတွေဆီကို အလည်အပတ်သွားပါ။ သူတို့နဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး စကားပြောဆိုပြီး သူတို့အနှစ်သက်ဆုံး စာအုပ်များကို ငှားရမ်းဖတ်ရှုပါ။
Refreshment – (11)
ဆွေမျိုးများနဲ့ အိမ်နီးချင်းများရဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေကို ထိန်းကျောင်းပေးပါ။ ကလေးငယ်လေးများရဲ့ မျက်လုံးများမှတစ်ဆင့် လောကကြီးကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့အတွေးအမြင်ဟောင်းတွေကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ပါ။
Refreshment – (12)
www.uroulette.com ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ကံကြမ္မာလှည်းဘီးကို ထောက်ပြီးမှ မိမိကျရောက်တဲ့ ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့် သင်ကြည့်နေကျ ဆိုက်တွေကနေခွဲထွက်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။
Refreshment – (13)
သင်ဖတ်နေကျမဟုတ်တဲ့ မဂ္ဂဇင်းအသစ်တစ်မျိုးကို ရှာဖွေဝယ်ယူပါ။ သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် လတ်ဆတ်သစ်လွင်တဲ့ အတွေးအခေါ်တချို့ကို ရရှိပါလိမ့်မယ်။
Refreshment – (14)
သင်နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသား အစားအစာတွေကိုပဲ မတူညီတဲ့ ချက်ပြုတ်မှုပုံစံတွေကို အသုံးပြုပြီး ချက်ပြုတ်စားသောက်ကြည့်ပါ။
Refreshment – (15)
ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်လောက် နေရာအသစ်မှာ နေ့လယ်စာ စားသုံးကြည့်ပါ။
Refreshment – (16)
သင့်ရဲ့အိမ်က ပရိဘောဂပစ္စည်းများကို ပြန်လည်နေရာချထားကြည့်ပါ။ ဒါဟာ မိမိရဲ့ အိမ်တွင်းမှာ သစ်လွင်လတ်ဆတ်တဲ့ ခံစားမှုကို ဖန်တီးရာရောက်ပါတယ်။
Refreshment – (17)
သင်အရင်က မစားဖူးတဲ့ အစားအစာတချို့ကို စမ်းသပ်ဝယ်ယူပြီး စားသောက်ကြည့်ပါ။ ဒါဟာလည်း စိတ်အပြောင်းအလဲဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။
Refreshment – (18)
သင်အရင်က အပန်းဖြေခရီးသွားခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာများကို ပြန်လည်တွေးတောကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ မှတ်ဥာဏ်စွမ်းအားတွေကိုသုံးပြီး ပြန်လည်စဉ်းစားပါ။ ဒါဆိုရင် အဲဒီအချိန်တုန်းက သင့်မှာရှိခဲ့တဲ့ စိတ်ခံစားမှုလေးတွေကို ပြန်လည်ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Refreshment – (19)
သင့်ရဲ့ အရင်က သိဟောင်းကျွမ်းဟောင်းများကို ပြန်လည်ဆက်သွယ်ကြည့်ပါ။ သူတို့ကို အချိန်ပေးပြီး ဆက်ဆံကြည့်ပါ။
အထက်မှာပါခဲ့တဲ့ Refreshment နည်းလမ်းတွေဟာ သင့်အတွက် ရှင်းလင်းလွယ်ကူပြီး သက်သောင့်သက်သာရှိစေမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့အတူ အသစ်တဖန် ပြန်လည်မွေးဖွားလိုက်ရအောင်နော်။
အချစ်ဆိုတာဘာလည်း.....ချစ်တတ်တဲ့စိတ်ဆိုတာကရော ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ ခံစားပေး ခံစားကြမှာလည်း ကျွန်တော် ဘာမှမသိဘူး။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အချစ်ဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်ဖို့ အခြေခံအကြောင်းရင်း နှစ်ချက်ပဲလိုတယ် ယုံကြည်မှု နဲ့ နားလည်မှုပဲ။ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် အချစ်ခံဖို့ဆိုရင် အဲဒီ့လူကို ယုံကြည်နိုင်မှ နားလည်ပေးနိုင်မှ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်လည်း နားလည် ယုံကြည်မှ အချစ်ဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်ပါတယ် ချစ်တတ်ပါတယ်....။
ကဲပါ အချစ်အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကို စာစောင်တစ်ခုထဲမှာ ဖတ်ဖြစ်ရလို့ ထပ်ဆင့်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင် သူ့အားနည်းချက်အပါအ၀င် သူ့ရဲ့အရာအားလုံးကို လက်ခံနိုင်ရပါမယ်။
အချစ်မှာ ယုံကြည်ခြင်းတွေ လိုပါတယ်။ တစ်ဘက်သားကို မယုံကြည်ဘဲ အမြဲသံသယအမေး၊ သံသယအတွေးတွေနဲ့ အချစ်ကိုမယုံကြည်ခဲ့ရင် နောက်ဆုံးမှာ လမ်းခွဲခြင်းနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်ရပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဘက်သားကို ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာ သူ့အပေါ်ထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အရေးပေးမှုကို ပြသနေသလိုပါပဲ။ ဖုန်းလေးတစ်ချက်နဲ့ 'အလုပ်ပင်ပန်းနေလား?' ဆိုတဲ့ ဂရုစိုက်တဲ့ အမေးလေးမေးနိုင်သလို "မိုးအေးပြီနော်...အနွေးထည်ထပ်ဝတ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်" ဆိုတဲ့ မက်ဆေ့လေးလည်းပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဂရုစိုက်မှုတွေက တစ်ဘက်သားအတွက် တကယ့်အသုံးမ၀င်နိုင်ပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ သူ့စိတ်ကို နွေးထွေးကြည်နူးစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
လူတစ်ယောက်ကိုချစ်ပြီဆိုရင် သစ္စာခိုင်မြဲရတယ်။ လှေနံနှစ်ဖက်နင်းတာက ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို နာကျင်ဝမ်းနည်းစေတဲ့အပြင် နောက်ဆုံးမှာ လမ်းခွဲတာနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်ရတတ်တယ်။
တစ်ဘက်သားရဲ့အရာအားလုံးကို ကျေကျေနပ်နပ်လက်ခံတဲ့အပြင် အချစ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ပျော်ရွှင်၊ကြည်နူးခြင်းတွေကိုလည်း ကျေကျေနပ်နပ်ခံစားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ချစ်ခရီးလမ်းက ပိုတာရှည်တည်မြဲပျော်ရွှင်မှာဖြစ်တယ်။
လက်ထပ်ပြီးအတူနေသည့်တိုင် တစ်ဘက်သားကို ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှုနဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တချို့ ရှိစေသင့်တယ်။ ကိုယ်နဲ့အိမ်ထောင်ကျတာဟာ ထောင်ထဲရောက်သွားသလို အချုပ်အနှောင်ခံတာမျိုး တစ်ဘက်သားကို မခံစားစေချင်ဘူး။ ဒါကြောင့် သူကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှုဆိုတာ ရှိသင့်ပါတယ်။
အချစ်ဆိုတဲ့အရာက ကိုယ်ပေးဆပ်တိုင်း ပေးဆပ်သလောက် ပြန်ရမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မပေးဆပ်ရင်တော့ လုံးဝပြန်ရဖို့ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်ပေးဆပ်သလိုမျိုး တစ်ဘက်သားက ပြန်ပေးဆပ်ခဲ့ရင် ဒါဟာ စစ်မှန်တဲ့အချစ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
အချစ်မှာ အရေးအပါဆုံးအရာက နှလုံးသားတစ်စုံပဲဖြစ်တယ်။ တစ်ဘက်သားကို နှလုံးသားနဲ့ရင်းပြီး ချစ်သင့်တယ်။ ကြင်နာနားလည်သင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ချစ်ခြင်းမှာ နှလုံးသားတစ်စုံသာ မပါခဲ့ရင် အချစ်စစ်လို့မည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
စကားပြောကောင်းတဲ့ချစ်သူက "ငါဟာ မင်းအတွက်မွေးဖွားလာတာပါ" လို့ပြောတတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ရှင်သန်မှုတွေရှိကြတယ်။ တစ်ဘက်သားကို အလွန်အကျွံ မှီခို၊ အားကိုးတာက သူ့ကိုတာဝန်ပိုစေတဲ့အပြင် စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေပါတယ်။
သင့်တင့်တဲ့ မနာလို၊ သ၀န်တိုမှုတွေက သူဟာ ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါကြောင်း တစ်ဘက်သားကို ခံစားမိစေတယ်။ သ၀န်တိုဖို့ အကျိုးအကြောင်းညီမျှရမယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။ အကျိုးအကြောင်း အဆက်အစပ်မရှိတဲ့ သ၀န်တိုမှုတွေက တစ်ဘက် သားကို မလိုလားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
အနမ်းတစ်ပွင့်က စကားအခွန်းထောင်သောင်းထက် သာလွန်ပါသတဲ့။ ညင်သာတဲ့အနမ်းတစ်ပွင့်နဲ့ ကိုယ့်မြတ်နိုးမှု၊ ကြင်နာမှုကို ပြသနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ချစ်တဲ့သူကိုနမ်းဖို့ မတွန့်တိုသင့်ပါဘူး။
ချစ်တာနဲ့နှစ်သက်တာမတူပါဘူး။ ချစ်မိပြီဆိုရင် တစ်ဘက်သားအတွက်အရာရာပေးဆပ်ရဲပါတယ်။ "ချစ်တယ်" ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းက တခြားတန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင်တွေထက် တစ်ဘက်သားရဲ့ရင်ကိုနွေးထွေးကြည်နူးစေပါတယ်။
တချို့က အချစ်ဦးနဲ့ဘာကြောင့်အလွယ်တကူ ကွေကွင်းကြရသလဲ? အကြောင်းက ငယ်ရွယ်စဉ် ရည်းစားထားချိန်မှာ ကလေးဆန် စိတ်တွေများနေခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူကမှ အဆင်အခြင်မရှိ စူစူအောင့်အောင့် မကြီးပြင်းတတ်တဲ့ကလေးကို အမြဲအလိုလိုက် ချစ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လူရင့်ကျက်ရင် အချစ်လည်း ရင့်ကျက်ပြီး လှပတဲ့ အဖူးအပွင့်တွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖူးပွင့် နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
ချစ်စကြင်စမှာ လူတွေက ကိုယ့်အားနည်းချက်၊အနာအဆာကို သိုဝှက်ပြိးဟန်ဆောင်နေတတ်ကြတယ်။ အဲဒိအားနည်းချက်တွေက နှစ်ကြာမှ တဖြေးဖြေးပေါ်လာတတ်တယ်။ ချစ်စတည်းက ပကတိအတိုင်းချစ်မယ် ဟန်ဆောင်မူတွေကင်းခဲ့ရင် အချစ်က ပိုတာရှည် တည်မြဲမှာဖြစ်တယ်။
Observe (ဂရုတစိုက် ကြည့်ရှုမှတ်သား)
တစ်ဘက်သားရဲ့ ၀ါသနာ၊ကြိုက်နှစ်သက်တာတွေကို ဂရုစိုက်မှတ်သားခြင်းဖြင့် တစ်ဘက်သားကို ပိုနားလည်စေသလို တစ်ခါတလေမှာ သူ့ကိုထူးဆန်းအံ့သြအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ-မဂ္ဂဇင်းအတူကြည့်တုန်း စာအုပ်ထဲကနာရီကို သူသဘောကျကြောင်းပြောခဲ့ရင် သူ့မွေးနေ့မှာ သူအံ့သြ၀မ်းသာအောင် လက်ဆောင်ပေးတာမျိုးဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို တစ်ဘက်သားရဲ့ အကြိုက်ကိုဂရုစိုက်တတ်တဲံ့စိတ်က လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေထက်ပိုတန်ဖိုးရှိကြောင်း တစ်ဘက်သားကို ခံစားစေနိုင်ပါတယ်။
ယောက်ျားလေးချစ်သူက မိန်းကလေးချစ်သူကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာသဘာဝပါ။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေး ချစ်သူကလည်း ယောက်ျားလေးချစ်သူရဲ့ လေးစားမှု၊ မျက်နှာသာပေးမှုကို ကာကွယ်စောက်ပေးရပါမယ်။လူတွေကြားမှာ သူ့အရှက်မရဖို့၊ ထိခိုက်နာကျင် မှုတွေ မရဖို့ သတိထားရပါမယ်။
ခွင့်လွှတ်သည်းခံခြင်းတွေ အချစ်မှာမရှိမဖြစ်တဲ့ အရာတွေဖြစ်တယ်။ တစ်ဘက်သားရဲ့ အမှားကို ပြည့်ဝတဲ့သဘောထားနဲ့ ခွင့်လွှတ်သင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူဟာ ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးသူဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ကိုယ့်အတွက် ချစ်သူပေးဆပ်တဲ့အရာတိုင်းကို ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ စိတ်ပျက်သွားတဲ့အမူအရာမျိုး၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားတဲ့ ပုံစံမျိုး ထုတ်မပြသင့်ပါဘူး။ အဲဒီအပြုအမူတွေက သူတို့ကို စိတ်ဓာတ်ကျအားငယ်စေပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် ချစ်သူပေးဆပ်တာကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်တဲ့အသွင်နဲ့ လက်ခံပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ နှစ်ဦးသားရဲ့ အကြင်နာကို ပိုမိုခိုင်မြဲစေပါတယ်။
တကယ်ချစ်ကြပြီဆိုရင် ဘ၀ရဲ့ပျော်ရွှင်၊ ၀မ်းနည်းခြင်းတွေကို အတူတကွမျှဝေသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘ၀ဖော်တစ်ဦးရဲ့ အရိုးရှင်းဆုံး ၀တ္တရားပဲဖြစ်တယ်။
အချစ်မှာ နူးညံ့မှုတွေရှိသင့်ပါတယ်။ အချစ်မှာ နူးညံ့မှုတွေကင်းခဲ့ရင် အချစ်က ချစ်စရာမကောင်းတော့ပါဘူး။
တစ်ဘက်သားရဲ့ အမူအကျင့်ကို နားမလည်နိုင်ခဲ့ရင် အချစ်ဟာ အထီးကျန်ပြီးဆက်ဆံရေးမဲ့သွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဘက်သားရဲ့ ရှုထောင့်ကနေပြီး တွေးတောခံစားပေးခြင်းအားဖြင့် တစ်ဘက်သားကို ပိုနားလည်စေနိုင်ပါတယ်။
အချစ်မှာ ဖြောင့်မှန်၊ မှန်ကန်ခြင်းတွေ အဆတစ်ရာလိုပါတယ်။ ကိုယ်ကလည်း ကိုယ့်ချစ်သူကို 'အပြောသမား' တစ်ယောက် မဖြစ်စေချင်သလို သူကလည်း ကိုယ့်ကိုဖြစ်စေချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချင်းချင်း အချစ်ညာစားသူ မဖြစ်စေချင်ကြပါဘူး။
အချစ်မှာ စောင့်တာက အခြေခံလိုအပ်ချက်လေးဖြစ်တယ်။ တစ်ဘက်သားနဲ့ အတူကြီးပြင်းရှင်သန်သင့်ပါတယ်။ ခရီးလမ်းဆုံးထိ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဖေးမစောင့်စားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်အရင် ခြေလှမ်းလှမ်းပြီး တစ်ဘက်သားကို နောက်ချန်ထားရစ်ခဲ့လို့ မသင့်ပါဘူး။
ချစ်သူအပေါ်ထားတဲ့ ကိုယ့်အချစ်ကို နေ့တိုင်းဆတိုးပြီး မြှောက်သွားခဲ့ရင် အချစ်က အလိုလိုနေရင်း အဆုံးမရှိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
နှစ်ယောက်အတူနေချိန်မှာ ငြင်းခုန်မှုက ရှိစမြဲဖြစ်တယ်။ နောက်ခြေတစ်လှမ်းဆုတ် အလျော့ပေးတာက ဒေါသမုန်တိုင်းကို ငြိမ်းအေးစေပါတယ်။ နောက်ပြီး ပြဿနာကို သဲသဲကွဲကွဲ မသိခင် 'လမ်းခွဲကြရအောင်' ဆိုတဲ့စကားကို အလွယ်တကူမပြောမိဖို့ သတိထားရပါလိမ့်မယ်။ စိတ်တွေငြိမ်သွားမှ ပြဿနာရင်းမြစ်ကိုရှာပြီး ဖြေရှင်းနည်းတွေ ရှာတာဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။
အိမ်ထောင်ရေးတည်မြဲပြီလို့ မှတ်ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အချစ်ရေးခိုင်မြဲပြီလို့ ထင်မြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်နေချိန်မှာ အရင်ညားစ၊ချစ်စ၊ကြင်နာစက ခံစားချက်မျိုး၊စိတ်သဘောထားမျိုးထားဖို့ မမေ့သင့်ပါဘူး။ တည်မြဲပြီလို့ မှတ်ယူပြီး အချစ်ကို ပစ္စလက္ခမထားဘဲ၊ အနယ်မထိုင်စေဘဲ နေ့တိုင်းအချစ်ကို အသစ်အသစ်အဖြစ်နဲ့ ချစ်နိုင်၊ ခံစားနိုင်ခဲ့ရင် အချစ်ဟာ အမြဲ နုပျိုလန်းဆန်းနေမှာဖြစ်တယ်။
လူတွေက အချစ်ကို အမျိုးမျိုးဖွဲ့ဆိုကြပါတယ်။ ဖွဲ့ဆိုကြတဲ့အထဲမှာ အချစ်တာရှည်ခိုင်မြဲဖို့၊ ချစ်ခရီးလမ်းဖြောင့်ဖြူး သာယာဖို့ အဓိကထားရေးဖွဲ့ကြပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အချစ်အက္ခရာလေးတွေကို ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ဖတ်ဖူးကြပေမယ့် ကျွန်တော်ရေးပြလိုက်တဲ့ အဲဓိပ္ပာယ်လေး တွေကတော့ ချစ်တတ်သူတိုင်းအတွက် အခြေခံစည်းမျဉ်းလေးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုကြောင်းပါ။
"တို့နိုင်ငံက ပညာတော်သင် ကျောင်းသားတွေ ပြီးသွားရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ်ပြန်မလာကြဘူးကွ" ဟု ဖွံ့ဖြိုးဆဲ အာဆီယံနိုင်ငံ တစ်ခုမှ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးက ပြောဖူးပါသည်။ ပညာရေး စနစ်တွင် နာမည်ကြီးသည့် အခြားနိုင်ငံများတွင် ပညာတော်သင်ဆုရပြီး ပညာထွက် သင်ကြားကြသည့် လူငယ်၊ လူလတ်များ ဒီဘက်နှစ်ပိုင်းတွင် များလာသော်လည်း ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ်ပြန်ပြီး ထိုပညာကို ပြန်အသုံးချသည့် ဦးရေက အချိုးကျကျ လိုက်ပြီး များပြားမလာသည့်အပေါ် သူကညည်းတွားခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများအတွက် တိုင်းပြည်ကို ဖွံ့ဖြိုးမှု နိမ့်ပါးခြင်းမှ ဆွဲတင်ရန် မျှော်လင့်ချက်မှာ ပညာရေးသာ ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်အခါတွင် လူငယ်အတော်များများ ပြည်ပထွက် ပညာသင်ခွင့် ရလာခြင်းမှာ မှောင်မိုက်နေသော လှိုဏ်ခေါင်း၏ အဆုံးရှိ အလင်းရောင်ကို မြင်ရသလို ဖြစ်ပါသော်လည်း ပညာတော်သင် အများစု အိမ်ပြန်ရောက်မလာကြခြင်းကြေ
ာင့် အဆိုပါ အလင်းရောင်မှာ မြင်သာမြင်ပြီး မကြင်ရသည့် ဘ၀မှာသာ ရှိနေရသည်။
ပညာတော်သင်ဆု ချီးမြှင့်သည့် ကျောင်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ပညာသင်ကာလ ပြီးဆုံးပါက မိမိနိုင်ငံသို့ မဖြစ်မနေ ပြန်ရမည်ဆိုသည့် စည်းကမ်းချက်ကို မထည့်ကြသော်လည်း ပညာတော်သင်ဆု ပေးရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုမှာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများအား ပညာရွှေအိုး မြှုပ်နှံနိုင်ရန် အကူအညီပေးခြင်း ဖြစ်လေရာ ပညာသင်ခွင့်ရသည့် ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် မိမိဆည်းပူးထားသည့် ပညာရပ်များအား မိမိနိုင်ငံအတွက် ပြန်အသုံးချပေးဖို့ လိုသည်ဟုတော့ နားလည်သဘောပေါက်ရမည်သာ။
အစိုးရက ချီးမြှင့်သည်ဖြစ်စေ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုက ထောက်ပံ့သည်ဖြစ်စေ ပညာသင်ဆု ပေးရခြင်း၏နောက်တွင် အဆိုပါ ကျောင်းသားသည် ပညာသင် ပြီးဆုံးပါက မိမိနေရပ်သို့ပြန်ပြီး ဆည်းပူးခဲ့သည့် ပညာတို့ကို ပြန်အသုံးချလိမ့်မည်ဆိုသည့် မျှော်လင့်ချက်ကတော့ အနည်းနှင့်အများ ရှိတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပညာသင်ဆု ပေးရန်အတွက် စိစစ်ရာတွင် လျှောက်ထားသူသည် ပညာထူးချွန်ရုံသာမက လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်း လုပ်လိုစိတ်လည်း ရှိမရှိကိုပါ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေး ရာဇ၀င်နှင့် ဘ၀ရည်မှန်းချက်အကြောင်း ရေးသားချက်များ၊ လူတွေ့မေးမြန်းခန်းများ စသည်တို့မှတစ်ဆင့် လေ့လာ အကဲခတ်တတ်ကြသည်။
သို့သော်လည်း ပညာတော်သင်ဆု ရသူတိုင်းသည်လည်း မျှော်လင့်ထားသလို မဟုတ်ဘဲ ပညာတော်သင်ဆု ရခြင်းကိုပဲ ဘ၀အတွက် အမြင့်သို့ တက်လှမ်းစရာ တုံးတစ်ခုလို ခုချင်သူများလည်း ပါဝင်နေတတ်ပါသည်။ မချမ်းသာသည့် မိသားစုမှ ပေါက်ဖွားလာသူ တစ်ဦးအတွက် ပြည်ပတွင် ပညာတော်သင်ခွင့်ရဖို့ ဆိုသည်မှာ အိပ်မက်တစ်ခုလို ဖြစ်လေရာ အဆိုပါ အခွင့်အရေးကို အသုံးချပြီး မိမိ၏ဘ၀ကို ဒီထက်မြင့်အောင် လုပ်နိုင်သည်မို့ မိမိစိတ်ထဲ ရှိတဲ့အတိုင်း မဟုတ်ဘဲ စကားလုံးလှလှများသုံးပြီး ရေးသွားပြောသွားသည့်အခါ ရွေးချယ်သူများဘက်က တကယ်ထိုက်တန်သူကို မျက်စိလျှမ်း ကျော်သွားပြီး အပြောကောင်းသူကို ရွေးမိသွားနိုင်ပါသည်။
အစိုးရ အစီအစဉ်ဖြင့် ပညာသင် သွားသူတို့မှအပ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် မိမိသွားရောက်ကြသူများအဖို့ ချည်နှောင်မှု မရှိခြင်းကြောင့် ပြည်တော်ပြန်လာခြင်း၊ ပြန်မလာခြင်းမှာ မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်နေလေရာ များသောအားဖြင့် ပြန်မလာဖို့လမ်းကိုသာရွေးပြီး ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ အခြေချကြသည်က များပါသည်။
ဒီအထဲ ငွေကြေးကြောင့်အပြင် ဘ၀အဆင့်အတန်း မြင့်မားမှုကို မက်မော၍ မပြန်ချင်ကြသူများလည်း ရှိပါသည်။ မိမိနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ရာ ဘ၀အခြေအနေထက် အဆများစွာသာသည့် နိုင်ငံရပ်ခြား ရောက်သည့်အခါ အိမ်မပြန်ချင်ပါဟု ဆိုလျှင်လည်း လူ့သဘာဝမို့ အပြစ်တင်ရန်လည်း ခက်လှပါသည်။ ရေဆိုသည်က မြင့်ရာမှ နိမ့်ရာသို့သာ စီးတတ်သော်လည်း လူဆိုသည်က နိမ့်ရာမှ မြင့်ရာသို့သာ သွားတတ်ချင်ကြသည် မဟုတ်ပါလား။
ပညာသင်ပြီးနောက် ပြန်လာခြင်း၊ ပြန်မလာခြင်းမှာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ၏ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် တစ်ဖက်က တိုင်းပြည်အနေဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် ဦးနှောက်ယိုစီးမှု ပြဿနာကို စဉ်းစားဖို့လည်း လိုပါသည်။ တိုင်းပြည်တစ်ပြည် အနေဖြင့် တော်ပေ့ဆိုသော ကာယလုပ်သား၊ ဉာဏလုပ်သား အင်အားစုများ အထွက်သာရှိပြီး အ၀င်မရှိခဲ့လျှင် လူ့အရင်းအမြစ် အကျပ်အတည်းနှင့်ကြုံပြီး မုန့်လုံးစက္ကူကပ် သံသရာမှ ထွက်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံကြီး တစ်ခုအတွက် အရည်အချင်းရှိသည့် ဦးနှောက်ပိုင်ရှင်များ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ဆုံးရှုံးရုံဖြင့် တိုင်းပြည်မသိသာသွားသော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတစ်ခု အတွက်မူ ပညာရှင် ခေါင်းတစ်ခေါင်း ဆုံးရှုံးလျှင်ကို သိသိသာသာ အထိနာပါသည်။ ဒီလိုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများနောက် အမီလိုက်ဖို့ ကြိုးစားရင်း ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများမှာ ဒုံရင်းဒုံရင်း ဘ၀က မတက်နိုင် ဖြစ်ရတာ များပါသည်။
ပညာတော်သင် ကျောင်းသားတို့က 'ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ဒီပညာတွေကို အသုံးချစရာ ရေခံမြေခံကောင်းများ မရှိလို့ပါ'ဟု တိုင်းပြည်အပေါ် လွှဲချလေ့ ရှိသလို တိုင်းပြည်ဘက်က ကြည့်လျှင်လည်း ပညာတတ်တွေ ဆုံးရှုံးနေရလို့ တိုင်းပြည်သည် ရှေ့သို့မဆက်နိုင်ဟု လက်ညှိုးထိုး နိုင်ပါသည်။ ဒီနေရာတွင် တစ်ဖက်တည်းကိုချည်း မေးငေါ့လျှင်လည်း တရားမည် မထင်ပါ။ နှစ်ဖက်စလုံးက မှန်နေသည်ချည်း မဟုတ်ပါလား။
လူဆိုသည်မှာ ပရဟိတထက် အတ္တဟိတကို ပိုဦးစားပေးတတ်သည် မှန်သော်လည်း လူငယ်နိုင်ငံသားတို့ အနေဖြင့် အတ္တထက် ပရကို ပိုဦးစားပေးခဲ့ကြသော၊ (တစ်နည်း)မြင့်ရာမှနိမ့်ရာသို့ ပြန်လာပြခဲ့ကြဖူးသော သူရဲကောင်းတို့ကို အနည်းအကျဉ်းမျှဖြစ်စေ အတုယူ အားကျတတ်ဖို့ လိုသလို တိုင်းပြည်ဘက်ကလည်း တိုင်းပြည်၏ အဖူးအပွင့်ကလေးများ တိုင်းပြည်ကို စွန့်ခွာမသွားချင်အောင် အခွင့်အရေးများ၊ အခြေအနေကောင်းများ တတ်နိုင်သမျှ များများဖန်တီးပေးရေး ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းပြည်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆီသွားရာ လမ်းခရီးတွင် ပိတ်ဆို့နေသော 'လူသားအရင်းအမြစ်များ ဆုံးရှုံးမှု'ဆိုသည့် ကျောက်တုံးကြီး ရွေ့စေရန် အစိုးရကရော နိုင်ငံသားများကပါ နှစ်ဘက်စလုံးက ပြိုင်တူတွန်းဖို့ လိုပါသည်။
နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ပညာသင်ခွင့် ရခြင်းသည် အဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် အကျိုးများပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိုအကျိုးကျေးဇူးကို မိမိတစ်ဦးတည်းသာ မခံစားဘဲ မိမိလို အခွင့်အလမ်း မရသူများနှင့်ပါ မျှဝေခံစားဖို့ လိုပါသည်။ မဟုတ်လျှင် 'မရှိလို့မလှူ၊ မလှူလို့မရှိ'ဆိုသည့် စကားအတိုင်း ပညာတတ်တို့ကလည်း မိမိနိုင်ငံမှာ မက်လုံးတွေ မရှိလို့ ပြန်မလာချင်၊ ပညာတတ်တို့ ပြန်မလာသဖြင့်လည်း မိခင်နိုင်ငံတို့မှာ တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင် မဆောင်ရွက်နိုင်ဆိုသည့် အရှုံးသံသရာသာ လည်နေလိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
SG Cute Guy
Posted by Alex Aung at 8:59 PM No comments: